ARGUT SPIREA: BEERASHADA IYO DARYEELKA, SII KORDHAYA OO SHARAXAYA ISTICMAALKA UBAXA EE NAQSHADAYNTA MUUQAALKA (SAWIRKA) - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo abuuro oo u koraan warshad argagixiso ah (tavolga) guriga
Haddii aad rabto inaad ku hagaajisid goobtaada dhirta, fiiro gaar ah u saar geed wacan oo lagu magacaabo Argut spirea. Waxaa ka mid ah qaabab badan oo la mid ah dhirta beertaada, waxay u muuqan doontaa sharaf iyo qurux gaar ah, dabcan, haddii aad siiso daryeel buuxa oo kobcin leh iyo horumarka. Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato shuruucda koritaanka qurxoon, iyo sida loo abaabulo daryeelka iyada - akhriso.
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa geed aan qabin jiilaal-adag oo ka mid ah qoyaanka casaan. Argut spirea waa qaab isku dhafan, "waalidiinta" kuwaas oo ah Thunberg spirea iyo noocyo kala duwan oo ubax leh. Waxay gaari kartaa dherer ahaan laba mitir oo dherer ah, waxaana badanaa ku fidaa saddex mitir ballaaran. Caleemaha afar-centimitir ee spirea - cagaar madow, cidhiidhi ah, lanceolate iyo xoogaa loo yaqaan. Lafaatiirta - dhuuban iyo curiye oo qaab ah arc. Buunshaha waxaa lagu kala soocaa qiimaha qurxinta ee gaarka ah ee ubaxyada cad, oo gaadhaya ilaa 0.8 cm dhexroor. Dhammaantood waxaa lagu soo ururiyaa dalladaha duufaanka, kaas oo si weyn u daboolaya dhammaan baadiyaha. Ubaxku wuxuu dhacaa laga bilaabo Maajo ilaa Juun, iyada oo ubax lagu dhajiyay caleemihii sannadkii hore.
Ma taqaanaa? Spiraea waxay ahayd ilihii ugu horreeyay ee asal ahaan loo yaqaan oo dhan. Ilaa 1839, salicin glycoside ayaa laga helay caleemaha, taas, oo sababtay isbeddelka kiimikada, ayaa noqday daroogo caan ah.
Argagaxa Spiraea waxaa loola jeedaa dhirta qunyar socodka ah, iyadoo kororka sanadlaha ah 10-20 cm oo keliya, laakin waxay u dulqaadanaysaa si fiican.
Iyadoo la tixraacayo in jiilka lagu sharraxay qaababka isdhexgalka ee dhirta, waxaa laga heli karaa meel u dhow hanti gaar ah iyo beeraha, halkii laga heli lahaa meelaha bannaan. Waxaa si fiican uula qaboojiyey carrada bacrin ah waxaana lagu kala gooyay heer sare oo ah caabbinta barafka, taas oo ay sabab u tahay in lagu kori karo dhammaan gobollada (marka laga reebo waqooyiga ugu dheer).
Baro neceybarka jacaylka Japan, spirea white, Nippon spirea, Bumald Spirea, Speara, Grefsham spirea, bjørka, Wangutta spirea.
Macluumaadka botanical ee Spirea Argut waxay u oggolaaneysaa in loo isticmaalo naqshada muuqaalka, labadaba hal abuur iyo koox kooxeed. Warshadu waxay ku haboon tahay dhirta gaarka ah, magaalooyinka iyo xitaa warshadaha, waxay u muuqdaan kuwo ku wanaagsan daadadka, beeraha, beeraha iyo geedo isku dhafan, oo si fiican u taagan oo ka soo baxaya dhirta intiisa kale iyada oo leh ubaxyo jilicsan.
Argut spirea waa warshad aan qabin, laakiin haddii aad rabto in ay si fiican u qaadato boggaaga oo si joogto ah kuugu farxaan saamaynta qurxinta, waa inaad raacdaa xeerarka beeraha iyo daryeel dheeraad ah.
Waxaan kugula talinaynaa in aad barato naftaada iyo noocyada spirea.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in aad dareenka ka qaadato ka hor beerashada baadiyaha waa meesha koritaanka mustaqbalka. Dhanka argagaxa, aaladda cadceedda furan waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican, iyada oo aan ku dhicin dhacdooyin biyo ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan haysan meel ka baxsan oo aad ku qasbantahay inaad qurux badan ku dhisto hooska, ka dibna waxay qaadanaysaa xidid, marka laga reebo in ubaxu uusan noqon mid caano ah. Sida ay ka kooban tahay ciidda, waxaa fiican in ay tahay mid bacrin ah, laakiin carrada dhoobada iyo dhoobada sidoo kale ma noqon doonto dhibaato weyn. Si loo fududeeyo habka wax loo qabsashada, isku dar ah oo ah dhul sodan, peat iyo ciid ayaa lagu daadin karaa godadka cowska, haynta saamiga 2: 1: 1.
Sidii hore u soo sheegnay, Argut spiraea waxay aad u fiican tahay xayawaanka bacrin ah, laakiin tani macnaheedu maaha inaad si joogto ah u quudiso. Kiisaska intooda badan, beerashada bacrimin waxay ku filnaan doontaa geedka muddo sannad ah, ama ka badan, nafaqooyin dheeraad ah ayaa loo baahan doonaa haddii aan dib loo dhigin manjooyin.
Ma taqaanaa? Spirea oo ka soo jeeda qowmiyaddeedii hore ayaa ku baahsan dalka Ruushka, sidaa daraadeed maaha mid la yaab leh in wakhtiyadii jiritaanka Ruushku, dadku waxay heleen codsi wax ku ool ah. Dhabooyinka dhaadheer iyo kuwa dhuuban inta badan waxay sameeyeen ramrod iyo karootada.
In kiiska labaad, geedka ka saaro oo dhan caleemaha, iyo baadiyaha waxay bilaabaan inay koraan mar kale (laga bilaabo xididka), taas oo uu u baahan doonaa xoog. Waxaad diyaarin kartaa nafaqada adoo isku dardaraya arrinta organic (compost 5-7 cm qaro) iyo bacriminta macdanta kakooban ee qiyaasta 30 g of HOL iyo 100 g of Kemira.
Sidoo kale akhri sidoo kale nooca qurxinta ornamental leh ubax cad oo lagu beeray beertaada.
Warshadu waxay u baahan tahay nidaam, laakiin waraabin dhexdhexaad ah, gaar ahaan marka ay timaado carrada cawska. Maalmaha xagaaga kulul oo qallalan, codsiga dareeraha waa in la sameeyaa saddexdii maalmoodba mar, iyo cimilada caadiga ah, oo leh roobab dhexdhexaad ah - mar 7-8 maalmood oo kasta. Badanaa, qiyaastii 15 litir oo biyo ah halkii baadiyaha waa in lagu isticmaalaa hal waraabka, ka dibna ciidda waa la googooyaa si aysan u daboolin qolof ah.
Argut spirea wuxuu dareemayaa mid aad u fiican bilaha xagaaga kulul, laakiin waxay u adkeysan doontaa jiilaalka qabooba wax aan ka yareyn. Haddii aad aaminsan tahay in dib u eegista beeralayda laga bilaabo gobollada waqooyiga, markaa waa inaadan ka cabsanin xitaa xitaa qiyaasta afartan dhererka ah. Wuxuu si fiican u shaqeeyaa hoy la'aan.
Dhalashada dhirta iyo beeritaanka
Inaad noqoto warshad isku dhejis ah, Argut spirea awood uma leh in ay soo saaraan habka abuurka, laakiin waa mid aad u habboon adoo raacaya iyo beerashada adoo dhigaya. Gooyn 10-mitir ah ayaa laga jarayaa caleemaha semi-lignified ee sanadkaan waxaana la dhigaa 12 saacadood xal bacriminta humicis ah ama halabuurka dhafan. Ka dib markii waqtiga la cayimay, waxaa lagu meeleeyay haraaga diyaarsan, oo qoto dheer 3-4 cm oo ciidda.
Sidoo kale qallajinta waxay faafin kartaa lilac, ivy, hydrangea iyo dracaena.
Haddii aad sameysid nidaamkan bartamaha xagaaga, markaa dayrta waxay jiri doontaa xidido wanaagsan. Haddii ay suurtagal tahay, waxaad isticmaali kartaa gooynta cagaaran ee la gooyey bilowga xagaaga. Dhererka qaybahaas waa in ay ahaadaan 7-10 cm, waana fiicantahay haddii ay jiraan caleemo hoose oo ka baxsan iyaga. Xaaladdan oo kale, qoto dheer oo beerto waxay u dhigantaa 2 cm Si loo soo saaro qashin marka caleemaha ay soo baxaan (taasi badanaaba waxay dhacdaa dhamaadka guga), waxaa lagama maarmaan ah in laysku gooyo ciidda laamihiisa hareeraha baadiyaha, oo ku dhaji karnaa isku dhafan oo dabool leh ciidda. Si ay u koraan, waxay ku xidhan yihiin jeexjeexyada, taas oo lagu tilmaamayo jihada saxda ah, ka dib markaa iyaga oo la waraabiyo oo la bacriminayo 7dii maalmoodba mar oo ay ku jirto maadada organic. Iyadoo daryeelka saxda ah ee guga soo socda waa fursad kasta oo lagu helo geedo wanaagsan, iyada oo nidaam xidid si fiican loo horumariyey.
Waa muhiim! Wixii horumarin dhakhso ah ee rhizomes, inflorescences ugu horeysay ee u muuqda on duurka dhalinyarada, waxaa ka wanaagsan in si degdeg ah u saaro.
Waqtiga ugu haboon ee lagu beerayo geedo Argut spirea waa qeybtii kowaad ee bisha Abriil. Ceelka waa in la diyaariyaa horay iyadoo la qodayo godad yar, 0.5 m oo qoto dheer iyo 30% ka badan abuur abuurka ah. Si aad u bilawdo, mareeyaha boodhka ah oo laga diyaariyey isku dar ah qashinka, qashinka iyo dhoobka dhererka (dhumucda qiyaasta - 10 cm) ayaa la dhigayaa dhinaca hoose, lakabka 5-sentimitir ee ciid ayaa lagu rakibay dusha sare.
Nidaamka degitaanka laftiisu waa sidan soo socota:
Qaadashada seedling ee saldhigga hal gacan ah, hoos u dhig godadka si qoorta xididku u dhaqdo dusha ciidda.
Iyadoo gacantaada labaad, si tartiib ah u buuxi ceelka leh isku dar ah ciidda iyo bacriminta, si taxaddar leh u hubin in dhammaan xididada si fiican loo toosiyo oo aan kor ku xusan.
Markaad buuxiso rhizome, ku shub seedling iyo saydhaa oo dhul kale oo dheeraad ah, iyo 30 daqiiqo ka dib ku shub ciidda leh bacriminta humic dareere ah.
Waa faa'iido leh ciidda dusha ciidda leh lakabka peat 5-7 cm qaro weyn.
Dalkan ayaa loo tixgelin karaa dhamaystiran, iyo dhammaan wixii lagaaga baahan yahay mustaqbalka - si loo hubiyo in dhirta si haboon loo daryeelo, iyada oo la raacayo waraabinta iyo manjooyin.
Argut spirea Blooms guga iyo ficil ahaan uma baahnid manjooyin. Kaliya marka laga reebo waxay noqonaysaa tallaabooyin nadaafadeed oo isla markiiba ka dhacaya ubax ka dib. Si loo saaro qalajiyo, laamood oo la jajabiyey iyo caleemo jir ah oo ka weyn shan sano. Maaha mid u qalma in la gooyo caleemaha caajis ah, maadaama ay tani sii xoojin doonto koritaanka laanta dhinacyada iyo ma jiri doonto wax saameyn ah "timaha". Gubashada Spirea. Argut spirea waxaa la sameeyaa dhammaadka bisha Maarso ama billowgii Abriil adigoo ka saaraayo laamaha la qaboojiyey iyo daciifka. Kaliya 5-6 caleemo adag ayaa laga tagayaa. Si aad si buuxda ugu noolaato baadiyaha, waxaad u baahan doontaa in aad ka saarto dhammaan laamihii hore ee xididka, si ay burooyinkeeda hurdo oo toosan oo koro koritaanka.
Waa muhiim! Si Argut's spirea u ilaaliyo guryaha qurxinta, waxay u baahan tahay timo jarjaran (gooyaa caleemaha dheer-ubax), taas oo la sameeyo 2-3 sano kasta.
Iyada oo habka mas'uul ka ah arrinta dhirta sii kordhaya, waa in aysan jirin wax dhibaato ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr dabeecadood oo weli ku haboon xusuusinta:
Dagaalka argagaxa ah ee beeray xilliga dayrta ayaa laga yaabaa inaanay badbaadin jiilaalka, xitaa inkastoo ay adag tahay jiilaalka sare. Dhirta yaryar ma aha mid xooggan oo si buuxda loo sameeyay, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan inay siiso xaaladaha ugu raaxo leh ee koritaanka iyo horumarka;
Xoortay geedo waxay u qalmaan dareen gaar ah, sababtoo ah haddii aad jarjartey caleemaha ubax, tani waxay horseedi doontaa korodhka korriinka ee laamaha, oo leh ubaxyo yar oo dhamaadka ah (guud ahaan muuqaalka qurxinta ee geedku ku xanuunsanayo). Haddii kale, nooca spirea noocan maaha mid aad u dhibeyso.
Waa muhiim! Inkasta oo ay adag tahay jiilaalka sare ee isgoysyada, haddana wali waxaa lagula talinayaa dadka deggan gobollada waqooyiga in ay hoy geedka jiilaalka u dhigaan, sababtoo ah haddii ay yar tahay, guud ahaan sawirka qurxinta ayaa si dhab ah u xanuunsanaya.
Argut spiraeus ayaa loo qoondeeyey inay noqoto mid aad u adag, sababtoo ah qoyaannada caadiga ah ee aan caadiga ahayn waxay ku dhow yihiin inaanay ka baqin. Inta badan, waxay ka jirtaa cayayaanka, kuwaas oo ay yihiin caarada caarada, aphids, macdanta caleenta ah, macdanta rosaceous iyo siisay kala duwan:
Caarada caarada caarada ah ee caleemaha ah ee caleemaha iyo inflorescences iyo ka baxaan shabakadaha caarada on caleemaha. Caleemuhu waxay noqdaan huruud, qallalan oo dhicisoobaan, cayayaanka ayaa si gaar ah ugu firfircoon xagaaga kulaylka iyo qallalan. Si aad uga takhalusto cayayaanka iyo soo celinta dhirta dhammaan qurxinta, waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro caleemaha Spiraea oo leh xal boqolkiiba 0.2 ah oo ah Phosphamide, Acrex, Keltan ama Karbofos.
Aphids waxay inta badan saameyn ku yeelataa caleemaha iyo dhalinyarta dhalinyarada, iyagoo abaabulaya gumeysiga oo dhan cayayaanka halista ah. Waxay ka cabtaa dhammaan juiceecada ka timaada spirea, waxay bilowday hawsheeda dhammaadka Juun waxayna sii wadaan inay ka caroodaan illaa Ogosto. Si loo daaweeyo warshadda saameeya, bilawga xilliga xilli sii kordhaya, ku dabool wax ka kooban 5% "Pyrimor", kaas oo lagu daboolo ciidda, oo sii xoojiya 2-5 cm (15 g oo ah walxaha mitirka labajibbaaranaha).
Rosan leafworm waxaa lagu dhaqaajiyaa celceliska heerkulka +13 ° C. Beerta cayayaanka ayaa soo jiidata caleemo dhowr ah oo tuubo ah iyo daloolo godad iyaga oo iyaga u maraya, taasoo keenaysa baadiyaha si ay u engegaan oo ay lumiyaan saamaynta qurxinta. Wixii daaweynta dhirta, isticmaal 0.7% isku dhaf ah Bitoxibacillin oo isku qasan 0.03% Pyrimor.
Baro sida loola macaamilo caarada caarada iyo caleen.
Cayayaankaas ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa marka cayayaanka kale ay muuqdaan, sidaa daraadeed marnaba ma noqon doonaan kuwo aad u sarreeya. Haddii aad rabto inaad ka ilaaliso argagaxa argagixisada khatarta noocan oo kale ah, ka dibna waxa fiican inaad abuurto geedo ka fog ilaha suurtogalka ah ee cudurka iyo bacriminta dhirta waqti go'an. Sida cudurada, spirea waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo cudurro faafa sida cirridka cawliga ah iyo noocyada kala duwan ee lafdhabarta, laakiin tani waa dhif iyo naadir. Daroogada "Fitosporin". Si loo daaweeyo dhibaatooyinkaan, diyaarinta fungicidal sida Fundazole, Fitosporin, Bordeaux isku dar ah iyo baaruud kolloid ah ayaa loo isticmaalaa. Sii daryeeli haboon iyo fiiro gaar ah oo ku saabsan argagixisada - iyo geedku marwalba wuu ku farxi doonaa quruxdiisa iyo xajmigeeda, noqoshada walxo fiican oo naqshad dhuleed.
Go'aanso dabaqa haraaga guinea iyo xabadaha
Noocyada caanka ah ee dalagyada xididka leh ee sharaxaadda iyo sawirka
Sida loo daweeyo anaplasmosis ee lo'da
Faleen Phylloxera: Hababka xakamaynta, sababaha
Ka shaqeynta shinni ka soo sax ah waa dhacdo lagama maarmaanka u ah dhammaan beero-wadaagga. Mararka qaar nolosha qoysaska oo dhan bees waxay ku xiran tahay, ka dibna daroogada "Bipin" waxay u timaadaa caawin, oo ay ku jiraan amitraz. "Bipin": Faahfaahinta, halabuurka iyo foomka sii deynta daroogada Amitraz, oo ah qaybta ugu weyn ee firfircoon ee "Bipin", waa daawo loogu talagalay in lagu dagaallamo jiritaanka xoolaha. Read More
Kiwi: faa'iido leh ama waxyeello leh? Codsiga iyo saameynta jidhka